Kim Nam-gil – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Closet (2020) Unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Horror, Thriller အမျိုးအစား ကြိုက်သူများအတွက် ၂၀၂၀ ထွက် ကိုရီးယားဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက် ယုံးဆန်းဝန်းဟာ အင်နာဆိုတဲ့၁၁နှစ်အရွယ်သမီးလေးနဲ့ အဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…အလုပ်ဇောကပ်လွန်းတာကြောင့်ရော ဇနီးရဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကနေမရုန်းထွက်နိုင်တာကြောင့်ရော panic disorderဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ယုံဆန်းဝန်းတစ်ယောက် တစ်နေ့မှာ သမီးဖြစ်သူအင်နာအိမ်ထဲမှာနေရင်း ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်… တစ်လကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်က အသက်ရှင်သေးရဲ့လား ?အင်နာ ပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းက ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ ? Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Wutyi May ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Horror, Thriller အမ်ိဳးအစား ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ထြက္ ကိုရီးယားဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ။ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ကကားအက္ဆီးဒင့္ေၾကာင့္ဇနီးျဖစ္သူဆုံးပါသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ယုံးဆန္းဝန္းဟာ အင္နာဆိုတဲ့၁၁ႏွစ္အ႐ြယ္သမီးေလးနဲ႔ အေဖတစ္ခုသမီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္…အလုပ္ေဇာကပ္လြန္းတာေၾကာင့္ေရာ ဇနီးရဲ႕ေသဆုံးခဲ့တဲ့အျဖစ္ပ်က္ကေနမ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ေရာ panic disorderျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္နဲ႔ေဆးကုသမႈခံယူေနရတဲ့ယုံဆန္းဝန္းတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔မွာ သမီးျဖစ္သူအင္နာအိမ္ထဲမွာေနရင္း ႐ုတ္တရက္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္… တစ္လၾကာေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တဲ့ကေလးတစ္ေယာက္က အသက္ရွင္ေသးရဲ႕လား ?အင္နာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားရတဲ့ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းရင္းက ဘာျဖစ္လိမ့္မလဲ ? Credit Review ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Wutyi May ျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 5.7/10 603 votes
Pandora (2016) Unicode ဒီကားလေးကတော့ Rating 6.5ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ လက်လွှတ်မခံဘဲ ကြည့်သင့်တယ်နော် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ အူဆန်မြို့မှာ နျူ ကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုစက်ရုံကြီးတွေရှိတယ် ဒေသခံအားလုံးနီးပါးကလည်း အဲ့ဒီစက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြတယ် ဒါပေမယ့် ဂျယ်ဟော့ကတော့ အဲ့စက်ရုံမှာ လုံးဝမလုပ်ချင်ဘူး အမြဲတမ်းမြို့ကြီးမှာပဲ အလုပ်လုပ်သွားဖို့ တွေးနေခဲ့တာ သူ့အမေကလည်း လုံးဝမြို့ကိုသွားခွင့်မပြုဘူး ဒီလိုနဲ့ အဲ့စက်ရုံမှာပဲအလုပ်ဆက်နေရတယ်ပေါ့ တစ်ရက်မှာ သူတို့မြို့မှာ အားပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်သွားတဲ့အခါ အဲ့ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ပဲ နျူ ဓာတ်ပေါင်းဖို့ရဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေမှာ ရေအေး ယိုစိမ့်မှုတဲ့ပြသနာပေါ်လာတယ် အဲ့ကိစ္စတွေကို ဝန်ကြီးတွေကလည်း သမ္မတကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အခါမှာ နောက်ပိုင်းသမ္မတသိသွားတဲ့အခါပြသနာကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ ရေအေးယိုစိမ့်မှူကိုရောဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲ စက်ရုံပေါက်ကွဲသွားတဲ့အခါမှာ ဂျယ်ဟော့က သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ဘယ်လိုကူညီမလဲ သမ္မတကရော ပြည်သူတွေအတွက် အဲ့ပြသနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်မှာလား နောက်ဆုံးမတတ်သာတဲ့အခြေအနေမျိူ းမှာ ဂျယ်ဟော့က နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဘယ်လိုအနစ်နာခံသွားလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါအရမ်းအရမ်းကိုကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့ Credit Review Zawgyi ဒီကား​ေလးက​ေတာ့ Rating 6.5ထိရ႐ွိထားတဲ့ ဇာတ္​ကား​ေကာင္​း​ေလးမို႔ လက္​လႊတ္​မခံဘဲ ၾကည္​့သင္​့​တယ္​​ေနာ္​ နယ္​ၿမိဳ႕​ေလးတစ္​ၿမိဳ႕ျဖစ္​တဲ့ ...
IMDB: 6.6/10 3,575 votes